Helitaanka - Ningbo MH
Dad badan oo internetka ah oo naafo ah waxay ka helayaan bogagyo adag ama xitaa aan macquul ahayn in ay isticmaalaan si fudud sababtoo ah habka loo qorsheeyey.
Websaydaan waxaa loogu talagalay inay noqoto mid la heli karo sida ugu macquulsan oo ay ula jaan qaadaan noocyada tiknoolajiyada loo adeegsado dadka naafada ah, oo ay ku jiraan akhristayaasha falanqaynta.
Sidaa daraadeed, martida ayaa xakamaynaya xajmiga qoraalka, midabada, calaamadaha caanka ah iyo xitaa isticmaal 'furayaasha furaha' ee kumbuyuutarka halkii aad ka heli lahayd jiirka si aad ugu dhex mariso bogagga.
Si aad ula socotid boggaan, fadlan isticmaal bogga sare ee bogga. Haddii aad isticmaaleysid akhristaha shaashadda, waxaad isticmaali kartaa furaha furaha hoose - M (saxaafad gali), tani waxay kuu geyn doontaa menu muhiimka ah, meesha aad isticmaali karto furaha tabka si aad ugu socoto xiriirrada.
Waxaad bedeli kartaa cabbirka qoraalka dukumiintigan si aad u dooratid adoo adeegsanaya shabakadaada. In Internet Explorer, dooro View, ka dibna Text Size, ka dibna size aad doorbiday.
Waxaa laga yaabaa inaad ku dhejiso naqshad u gaar ah boggaan. In Explorer Explorer Tools, ka dibna fursadaha Internet, ka dibna ku 'Tabaha Guud', ​​doorasho Xulashada. Ku xigta mid kasta ama sadexda sanduuq ee hubka ah si aad u ilowsiiso midabada, qaababka heesaha ama cabbirka xarfaha. Daaqad la mid ah waad bedeli kartaa calaamadahaaga adigoo gujinaya sanduuqa "checkbox" ee ku qoran, 'dokumentiga qaabka isticmaalaya qaabkayaga' ka dibna si kooban u fiiri naqshadaada oo guji ok.
Waxaan si fiican u baartey boggan, laakiin marwalba waxay doonayaan in aan hagaajino codsigeena oo waxaan jeclaan lahayn in aan ogaano haddii aad heshay dukumiintigan oo la heli karo ama haddii ay dhibaato kaa haysato.
Helitaanka Home Categories - Caqabado - Zippers - Ribbon & Tape - Raashin - Meelo - Buttons - Macmiilka - Tassel & Fringe / Qalabaynta - Qalabaynta Qalabka - Gawaarida & Gargaarka - Mashiinka & Qeybaha - Faaruq - Qaar kale Nagu saabsan - MHM Overview - MH Industrial - History History - Sheega Tilmaamaha - Wakiiladayada --Image Galleries - Albaabada Albaabka Nala soo xiriir - Joogitaanka Goobta - Dib u noqoshada Community - La soco - Codsiga --Nagu soo biir